Iqonga lasimahla le-GIS, kutheni lingathandwa? -Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Iiplatifti ze-GIS zamahhala, kutheni zingabonakali?
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISGvSIGGIS asibonise
Iiplatifti ze-GIS zamahhala, kutheni zingabonakali?
Ndiyishiya indawo evulekile ukucinga; indawo yokufunda ibhulogi imfutshane, ngoko ndiyayilumkisa, kuya kufuneka sibe yinto elula.
Xa sithetha nge "izixhobo ze-GIS zamahhala", amaqela amabini amajoni avela: uninzi olukhulu olubuza umbuzo
... kwaye yintoni ezo?
... kwaye kukho abasebenzisi babo?
Nangona iincinci zitholakala ngaphesheya kwesiteji, zinemibuzo efana nale:
... Ndenza okungakumbi ngaphandle kokuchitha imali
Nazi ezinye zezizathu zokuba iipulatifomu zamahhala zingekho kwifesenti yabasebenzisi abaninzi be-GIS.
1 Ikhefu lokufunda
Kwimeko GRASS, ukunika umzekelo, esi sixhobo sisebenza kunye neLuxux kunye neWindows, enayo API kwiC well ziweyo, onayo abaqeqeshiweyo ngokugqibeleleyo, emva kokuvavanya siqinisekisa ukuba yenza imisebenzi ye-ARCGis, kunye nezandiso zayo ezininzi ezixabisa amawaka eedola.
... kodwa ngubani oninika iklasi ye-GRASS kwilizwe laseLatin America?
Andithethi ngoqeqesho lwabaphuhlisi, bafunda ngokwabo, ngaphandle kwabaqhubi abaqhelekileyo bohlalutyo lomhlaba, ukulungiswa kwemifanekiso, ukuguqulwa kwedatha ye-raster kwi-vector ... ezo zinto i-GRASS iqhuba kakuhle kakhulu. Ngokuqinisekileyo ukunika uqeqesho lwe-GRASS kufanele ukuba kube lula kakhulu, kungabikho iiyure ezingama-24, kodwa isangqa esikhohlakeleyo sokuba kukho imfuno encinci yezi zifundo sithetha ukuba iinkampani ezinikele kuqeqesho azicwangcisi iinkomfa ngalo mbandela. Masingatsho ngezinye iinkqubo zasimahla okanye zasimahla njenge-gvSIG, intlakohlaza, ISaga okanye iJump engaziwa.
Ngoko ukuba i-curve yokufunda ixhaphake kakhulu yenza abasebenzisi baxabise ... ngendlela efanayo neLuxux ikhululekile, kodwa inkonzo yaseRedHat exhaswe kakuhle ibiza imali eninzi.
2 Kulula ukukrhaqha kunokufunda
Kucacile ukuba i-ESRI kunye ne-AutoDesk ziyaziwa kuba ubuqhetseba babanike isandla… okanye ihhuku. Nangona bomelele kakhulu, izixhobo ezahlukeneyo kwaye ngokungathandabuzekiyo zivunywa kakhulu yinkampani eyaziwayo, ishishini elincinci okanye elincinci elinikezelwe kwindawo yecartographic kufuneka lityala ubuncinci iidola ezingama-48,000 kwiimveliso ze-ESRI ukuqala nje isebe lophuhliso lwabasebenzisi aba-5 (ArcGIS, ARCsde , Umhleli we-ARC, i-ARC IMS… ngaphandle kweseva ye-GIS). Ke amaqonga emithombo evulekileyo ngumzobo olungileyo wabaphuhlisi, kodwa abaqhubi abaqhelekileyo bedesktop kuphela… baya kubeka isikhewu wamehlo kwaye bachithe i-1,500 yeedola kwi-intanethi :).
3 Kungcono ukuhamba kunye nezona ziwayo kunokuba zilungele.
Sibona esi siko naxa sichitha imali, umsebenzisi uyazi ukuba iMac ingcono kunePC, ukuba iLinux ingcono kuneWindows, ukuba ezinye izixhobo zeCAD zingcono kune-AutoCAD; ke la maqonga akhuphisanayo njengoDavide noGoliyati ahlala esezandleni "zokukhetha abasebenzisi" abahlawula amaxabiso afanayo.
Ngelixa ndikukhuphiswano phakathi "okuphantse kukhululeke" kunye "nexabiso elikhulu", udonga luba likhulu, ngaphezu kwesihlandlo esinye. kuthathwa ngabantu abathandekayo, ngokusebenzisa iziNinzi ... nangona ingekho simahla. Ke, sisebenzisa izixhobo ezixabisa i-4,000 yeedola ukuhlala iGeek, nangona uninzi lwabasebenzisi zingabinayo ilayisensi yesoftware, kodwa iinkampani.
… Ukuqukumbela, siyabona ukuba bububi obuyimfuneko ukuba iinkampani ezinkulu zibekhona, zibiza amawaka eedola kwilayisensi ukuze ibango lale teknoloji lizinzile. Kwaye iya kuqhubeka nobunye ububi obuyimfuneko, ukuba iqela liyaqhubeka nokulwa kwicala lomthombo ovulekileyo, nangona uninzi luya kubajonga njengamaNerds.
AutoDesk Blog ESRI ingca GvSIG OS GIS asibonise
Yintoni i-AutoCAD 2008 kwakhona?
Ukuthelekisa phakathi kwamaseva emephu (IMS)
Ukuphendula umbuzo owawuthunyelwe ngeposi:
I-GIS ehamba kwi-Apple:
-QGIS Oku kwakhiwe kwiC ++
-gvSIG. Eyakhelwe kwiJava, ngokukhawuleza kuMac njengoko ihamba njengenguqu ephathekayo. Ukusetyenziswa kwayo kusemgangathweni kwi Linux kunye neWindows
-Vala iJump. KwiJava, kodwa ngaphambi kokuba kulungele i-gvSIG.
Ezinye iinketho zisebenza kwiiparalells, ezibangela ukuba izicelo zeWindows ziqhube kwi-Mac.
Hlanganisa i-gvSIG kunye ne-SEXTANTE, kulabo abangesabi iJava
Hlanganisa iQGIS kunye ne-GRASS, kwabo bakhetha iC ++
MapServer okanye iMaphuGuide ngaphezu kweC ++
Vu melani Jc. Esi sithuba sisuka ku-2007, ngeli nqanaba siye sabona ukuveliswa kwemodeli evulekile, kwaye sonke sinethemba lokuba iziphumo zayo zokugqibela ziya kuhlala zizinzileyo.
Ndiyicinga ukuba lixesha le-software yomthombo ovulekile, ukuba yintoni efunekayo kukuba kukho uluntu oluphuhlisa.
Kwimeko ye-gvSIG, olu luntu lusebenza kakhulu kwaye lwandisa ngesantya esikhulu, kunye nekhosi zoqeqesho kwiindawo ezininzi kunye nenkxaso yobugcisa. Kuyinyaniso ukuba izixa ezikhulu inkqubo yolwazi uyehla kwaye mhlawumbi ArcGIS okanye nayiphi na enye software kwegunya ikulungele ngcono ukusebenza ngcono. Kodwa ke umbuzo kukuba balungiselelwe njani data, okt ukuphunyezwa kwe-GIS ka-zolawulo oluntu kunye namashishini olukhulayo, kwaye ntsingiselo kukuba onke umvelisi lolwazi umzobo up inkcazelo yayo kwiinkqubo kwaye walibeka eziqhelekileyo kwizibonelelo zedatha, ngokuthotyelwa kwemigangatho (i-WMS, i-WFS, njl. njl.) apho endaweni yokugxininisa idatha, zihlukeneyo kumaseva abelana ngolwazi, kunye naloo mqulu womsebenzi, isofthiwe yomthombo ovulekile, njenge-gvSIG, ebhaliwe kwiJava, ukuba iyincedo.
Ndiyathemba kwaye ndibetha kwi-software yomthombo ovulekileyo, kuba kwezinye iindidi zemihlaba, ithatha umhlaba kwiprosoftware yangasese, (isakhelo esinjengeDrupal, i-CMS WordPress, elgg, njl.
Ixesha elizayo lixhomekeke ekuxhumeni nasekuhlanganisweni kwazo zonke izixhobo zesistim evulekile, ekugqibeleni uRichard Stallman uya kulungile.
Siyabonga ngokucaciswa kwe-Alvaro
Alvaro Anguix uthi:
Iphuzu, i-SPRING ikhululekile, ayikhululekile.
Iprogram yakho oyithandayo kufuneka ife